Kormeere: Guddiga Waxbarshada oo ansixiyey habka isku-dhafka ilaa amar dambe | Updates
Kormeere: Guddiga Waxbarshada oo ansixiyey habka isku-dhafka ilaa amar dambe
Waalidiinta/Daryeeleyaasha Qaaliga ah:
Saaka, guddiga waxbarashada wuxuu ansixiyey talo soo jeedintaydii ahayd in lagu sii jiro qaabkii isku-dhafka dhammaan fasalada ilaa aar dabe, oo ay ugu wacan tahay kororka kiisaska fayraska ee degmada Hennepin iyo bulshooyinka ku xeeran. Talo soo jeedintayda waxaa kaloo laga milicsan karaa la tashigayga shaqaalaha iyo madaxda degmada.
Go’aankan macnihiisu waxaa weeye in ardayda dugsiyada hoose aanay ku soo noqonayn Oktobar 19keeda fasaladooda sidii markii hore la qorsheeyey. Dhammaan ardayda, marka laga reebo ku u Akadeemiyada Waxbarshada Durugsan, waxay ku sii jiri doonaan qaabka isku-dhafka ilaa aar dambe.
Waxaa isoo gaadhey qoysas si xoogan uga soo horjeeda go’aankan iyo qoysas iyaguna si xoogan u taageersan. Fadlan ogow inaan fahansan ahay in aanay jirin jawaab fududi. Fadlan ogow kuwan:
Go’aamada qaababka waxbarashada waxay ku salaysan yihiin xuduudaha uu go’aamisay gobolku, degmooyinka iskuuladana waxaa laga rabaa inay hubiyaan in go’aanada ay qaataan ku dhaco xuduudahaas. Gobolku wuu cadeeyey inay soo faragelin doonaan haddii degmooyinka iskuuladu doortaan qaab waxbarasho oo ka debecsan xuduudaha la ogolyahay
Waan ogahay in dadka qaar u fasirtaan in tilmaaha gobolku siinayaan iskuulada debecsaan, oo u fahmayaan in degmooyinka waxka bedelaan xuduudaha, taasi maaha turjumaad saxa.
Marka laga yimaado in loo hogaansamo tilmaamaha waaxda caafimaadka MN iyo waaxda waxbarashada ee MN, iskuulada degmooyinku waa inay u hogaansamaan Amarkii fulinta ee gudoomiye Waltz, kaas oo xambaarsan awooda sharciga.
Ilaa horaadkii Agosto, waxaan idinku soo wargelinaynay inaad filan kartaan dhaqdhaqaaq ku yimaada qaababka waxbarashada sanadka oo dhan, iyadoo ku xiran isbedbedelka xanuunka. Waxaan kaloo idin siinay doorashada Akadeemiyada Waxbarshada Durugsan qoysaska raba xaqiiqda inaan wax isbedel ahi ku dhicin oo ay ku jiraan waxbarshada dadban sanadkoo dhan.
Fadlan ogow inaanaan go’aankan u qaadan si fudud. Waan ogahay inay raad ku leedahay noloshaada maalinwalba. Dadka qaar waa u culays maalinle ah; qaar kale, waa u nafis. Nasiib darro se, ma jiro go’aan qaab waxbarasho oo farxadgelin kara qofkasta. Sidaa daraadeed waxaan sii wadi doonaa inaan go’aankeena ku salayno tusaalaha iyo tilmaamaha gobolka, anagoo u hogaansamayna xuduudaha nala siiyey.